Crisis in Zimbabwe Coalition Inoti Haitsigiri Kuti Ishe Charumbira Vatungamire Pan African Parliament
Chivabvu 10, 2018
Ishe Fortune Charumbira
Sangano rinorwira kodzero dzevanhu reCrisis in Zimbabwe Coalition rinoti harisi kutsigira mutungamiri wemadzishe, Ishe Fortune Charumbira, avo vari kukwikwidza kuve mutungamiri wePan African Parliament musarudzo dziri kuitwa kuSouth Africa nemusi weChina.
Sangano iri rinoti mawoko aVaCharumbira akasviba sezvo riri kuvapomera mhosva yekutyora kodzero dzevanhu munyika.
Mutauriri weCrisis in Zimbabwe Coalition, VaThabani Moyo, vanoti sangano ravo harisi kufara kuti VaCharumbira vari kuda kuita mutungamiri wePan African Parliament musarudzo dzichaitwa nhasi kuMidrand muSouth Africa vachiti nhoroondo yavo panyaya dzekuchengetedza kodzero dzevanhu munyika, haina kunaka.
VaMoyo vanotiwo VaCharumbira munhu akatarisana nemhosva mumatare emunyika nokudaro vakasarudzwa kutungamira Pan African Parliament vanosvibisa zita resangano iri.
Mutauriri weMDC inotungamirwa naMuzvinafundo Welshman Ncube, VaKurauone Chihwayi, vanotiwo Ishe Charumbira havana rutsigiro rweveruzhinji munyika pahurongwa hwavo uhwu.
Zvichakadai, vaimbomiririra Mhondoro Ngezi muparamende yeZanu PF uye vari nhengo yebato riri kutonga reZanu PF, VaBright Matonga, vanoti zvakakosha kuti Zimbabwe ive iyo inotungamirira Pan African Parliament vachiti zvinobatsirawo kuti Zimbabwe inzwikwe pane zvainenge ichida kuti zvigadziriswe nenyika dzekunze.
VaMatonga vanoti kana VaCharumbira vakasarudzwa kuve mutungamiri wePan African Parliament vanogona kusimudzira sangano iri pamwe nekumirira Zimbabwe zvakanaka sezvo vari munhu ane hunyanzvi.
Nechitatu, Ishe Charumbira vakawanikwa vaine mhosva yekuita zvematongerwo enyika nedare redzimhosva vakanzi vashambadze mumapepanhau, muterevhizheni, nenhepfenyuro, vachiti madzishe ose haafanirwe kupindira munyaya dzezvematongerwo enyika.
Dare rakatiwo mitemo yekutongwa kwematunhu inofanirwa kuranga Ishe Charumbira sezvo vakatyora mutemo zvichitevera mashoko avo ekuti madzishe ose emunyika anofanirwa kutsigira Zanu PF.
Nyaya iyi yakakwidza kumatare nesangano reElection Resource Centre.
VaCharumbira vari kukwikwidzana naVaPhenyo Butale vekuBotswana pachigaro chemutungamiri wePan African Parliament. Dare rePan African Parliament ibandiko reAfrican Union kana kuti A-U rinoshanda kusimbaradza nyaya dzekuchengetedzwa kwekodzero dzevanhu, hutongi hwejekerere ne runyararo muAfrica.
Pan African Parliament ine matunhu mashanu anoti Southern Africa, North Africa, West Africa, East Africa neCentral Africa uye nyika yoga-yoga iri muAfrica inosarudza nhengo dzeparamende shanu dzinopinda mudare iri.